Soo dejisan DirectX 12 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: DirectX
Xirmo software DirectX si gaar ah loogu talagalay in lagu hagaajiyo kartida computer ayuu duurka ku Suntionka. Darawallada DirectX isticmaali doonaa kaararka garaafyada ugu casri ah oo ey ugu badan ee suurtagal, jidaynayey hawlaha wixii multimedia lagu dhamaystiri doona in tayada ugu fiican. First of dhan, habkaani muhiim u ah kulan DirectX. Kulan badan ayaa u baahan marka rakibaadda by users DirectX presetter. Currently suuqa version a of DirectX, this ku siin karaan waxqabadka wanaagsan iyo taageero farsamada goynta-gees. Gaar ahaan, ciyaarta waxaa laga yaabaa in loo dhigay hooska iyo dareen taabasho, sida tessellation. Sidaa darteed animation in 3D noqon doontaa mid ka mid macquul ah oo diiradda faahfaahinta yar yar.
Wanaajinta tayada darawaliinta ah
Dhiciyaan of graphic
Soo dejisan DirectX
Faallo ku saabsan DirectX
DirectX Xirfadaha la xiriira